လင်းသန့်| November 10, 2012 | Hits:1
| | ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ အိုဘားမားတို့ ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလအတွင်းက အမေရိကန်သမ္မတ၏ ဘဲဥပုံရုံးခန်း၌ တွေ့ဆုံကြစဉ် (ဓာတ်ပုံ – Reuters)
pps12345 November 10, 2012 - 6:56 pm အန်တီစုရေ မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ ဘောင်းဘီချွတ်တွေက ကိုယ်ကျိုးကို သာ ကြည့်သာပါ။ သူတို့ လိုတာထက် စားလို့ရရင် ဆင်းသွားမှာ မပူပါနဲ့။
Reply Nang Geogia Ohn November 10, 2012 - 8:09 pm Oversea human right group and opposition group are just worry for budgets.If no problems in myanmar no money in their pockets.Just doing self right and shoutingfor human right.
Reply မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 13, 2012 - 3:13 am Nang Geogia Ohn ရေးတာကို အပြည့်အ၀ ထောက်ခံပါတယ်။ ပြည်တွင်းမှာ အခြေအနေကောင်းလာရင်၊ အကူအညီတွေကို ပြည်တွင်းကို တိုက်ရိုက်ပေးနိုင်လျှင် ပြည်ပက လုပ်စားတွေ ဂွင်တွေ ပျောက်ကုန်ပြီလေ။ အခုတောင် ပြည်တွင်း အလုအယက် အမြန်ပြန်ပြီး အဖွဲ့ ဖွဲ့သူ၊ ရှိပြီးသား လုပ်နေသူတွေထဲ အတင်းဝင် ပူးသူ လုပ်နေကြပြီပဲ။ အရင်ကတည်းက အဖမ်းအဆီးများ၊ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား များလေ သူတို့ လုပ်စား ကောင်းလေမို့ တချို့ မဆူ ဆူအောင်၊ အဖမ်းခံရအောင် အတို့အထောင် လုပ်ခဲ့ကြတာ။
Reply ABC November 11, 2012 - 3:50 pm It isagood report. Thank you.
Reply ကိုလူမှန် November 12, 2012 - 10:35 am အိုဘားမာရယ်ဒေါ်စုကိုသာမြန်မာပြည်ရဲ့ခေါင်ဆောင်အဖြစ်ပြောင်းလည်းပေးလိုက်ပါဗျာ။